अनुसन्धानात्मक लेख तयार पार्ने तरिका | EduKhabar
प्रा.डा. मनप्रसाद वाग्ले, नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा चिनिएको ब्यक्तित्व त हुन् नै उनले पछिल्लो समय प्रविधि मार्फत् सिकाइलाई विस्तार गर्ने अभियान शुरु गरेका छन् । यसको साधन भएको छ सामाजिक सञ्जाल फेसबुक । फेसबुक भन्नासाथ समयको बर्वादी ठान्ने केही शिक्षक/अभिभावकलाई चुनौती दिदैं उनले फेसबुक मार्फत् नै सकाइ विस्तार शुरु गरेका हुन् । सबै भन्दा पहिले उनले फेसबुककै मार्फत् थेसिस लेख्ने तरिका सिकाएका थिए । जुन हामीले पनि प्रकाशित गर्यौं, हाम्रा पाठकहरुले त्यसलाई खुबै रुचाए । त्यस पछि उनले अनुसन्धान प्रस्तावना तयार पार्ने बारेमा फेसबुक मार्फत् नै सिकाए । त्यो पनि निकै रुचाईयो । यस पटक वाग्लेले अनुसन्धानात्मक लेख तयार पार्ने र प्रकाशन गर्ने विषयमा केन्द्रित भएर फेसबुक मार्फत् नै सिकाएका छन् । उनको उक्त सामग्री हामीले साभार गरेका हौं – सं.
केही समय अघि अनुसन्धान प्रस्तावना कसरी तयार पार्ने ? भन्ने विषयमा मैले ३० वटा पाठ फेसबुक मार्फत यहाँहरु समक्ष पस्केको थिएँ । यहाँहरुको सकारात्मक प्रतिक्रिया र हजारौं सेयरले मलाई सन्तुष्ट बनाएको छ । स्वदेशी मात्रै हैन विदेशी विश्वविद्यालयमा स्नातकोत्तर र विद्यावारिधि गर्दै गरेका नेपाली विद्यार्थी समेत ती पाठहरुमा संलग्न भएर फाइदा लिन सकेकोले थुप्रै धन्यवाद समेत प्राप्त भएको हो । त्यसपछि कतिपय मुलुकमा अध्ययनरत त्यस्ता विद्यार्थीले आफ्नो अनुसन्धान प्रस्तावना र शोधपत्र समेत पुनरावलोकनको लागि अनुरोध गर्नुभयो र मैले सकेको सहायता गर्दै आएको पनि छु ।
आजबाट केही पाठ अनुसन्धानात्मक लेख तयार पार्ने र प्रकाशन गर्ने सम्बन्धमा हुनेछ ।
पाठ १ : सामान्य
जर्नलमा प्रकाशन गर्नका लागि अनुसन्धानात्मक लेख तयार पर्दा ध्यान दिनु पर्ने कुरा के होलान् ? यो प्रश्न प्रायः सवै अनुसन्धाता खासगरी शिक्षण र अनुसन्धानमा लागेका नव(प्रवेशीहरुको कौतुहलको विषय हुन सक्छ । एकाइसौं सताब्दिमा एउटा प्राज्ञिक व्यक्ति न त अनुसन्धान विना सन्तुष्ट रहन सक्छ न त जर्नलमा अनुसन्धानात्मक लेख प्रकाशन विना उसको क्षमतामा वृद्धि भएको ठहरिन्छ । खासगरी उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा लागेकाहरुको लागि त अनुसन्धान गर्नु, लेख लेख्नु र प्रकाशन गर्नु अनिवार्य नै मानिएको छ ।
कोरा शिक्षणले मात्रै अव उनीहरुको व्यक्तिगत प्राज्ञिक उन्नति र पदोन्नती दुवै असम्भव छ र तर हाम्रो जस्तो मुलुकमा केही अपवाद बाहेक अनुसन्धानात्मक लेख कसरी तयार पार्ने र त्यसको प्रकाशन सम्म पुग्न के कस्ता कुरामा ध्यान पुरयाउने भन्ने कुरा विश्वविद्यालयका कक्षा कोठामा सिकाइदैन जहाँवाट उच्च शिक्षा शिक्षणका लागि मानव स्रोत उत्पादन गरिन्छ । यसैलाई ध्यानमा राखी फेसबुकको सदुपयोग गर्दै अबका केही दिन यसैमा खर्चे कसो होला भन्ने बिचार फुरेकोले यो अध्यायको शुरुवात गर्ने जमर्को गरेको छु । यस सम्बन्धमा आफुलाई लागेको, आवश्यक देखिएको र अझ यो पनि भैदिए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने विचार कमेन्ट बक्समा हाल्नुहोला । सम्भव भएसम्म सवै समेट्ने प्रयास गर्नेछु ।
पाठ २ : के लेख्ने ?
सबभन्दा कठिन मोड हो यो । कस्तो विषयमा लेख्ने, शीर्षक के राख्ने ? शिर्षक नै कसरी तयार पार्ने ? जस्ता हजारौं प्रश्न तपाईंका अगाडि आउन सक्छ । कतिपय अनुसन्धाताको अधिक समय यसैमा व्यतित हुन्छ । कति निरास हुन्छन र विचैमा हराउँछन् । तर हरेस खानु पर्दैन । तपाईंको आफ्नो विषय क्षेत्र हुन्छ जसले तपाइंको भोलिको प्राज्ञिक उत्थानमा मद्दत गर्छ । यो व्यक्ति पिच्छे फरक हुन्छ । आफ्नो विषय क्षेत्रमा वैज्ञानिक, प्राविधिक र सामाजिक मुद्धाहरु हुन्छन । तिनै मुद्धा तपाईका अनुसन्धानको लागि मसला हुन सक्छ ।
राम्ररी ध्यान दिएर सोच्नुहोस् त्यस्ता थुप्रै विचार तपाईंंको मनमा आउन सक्छन् । पहिला आफ्नो विषय क्षेत्रमा तपाइंलाई असाध्य मन पर्ने उप–विषय वा चाख लाग्ने विषयवस्तु हुन्छन । त्यसैलाई पक्डेर अनुसन्धानको मसला बनाउनुहोस् । अनुसन्धान गर्नु पर्ने कारण पहिल्याउनु होस् । अनुसन्धान कुनै न कुनै प्राज्ञिक समस्यामा केन्द्रित हुन्छन् भन्ने कुरा हेक्का गर्नुहोस् । तपाइंको विषय क्षेत्र भाषा हो भने भाषाको मामिलामा हाम्रा समाजमा, कक्षा कोठामा, समाजमा, प्रदेशमा, स्थानीय तहमा वा पुरै राष्ट्रमा त्यसको मुद्धा पहिल्याउनुहोस् र हाम्रो जस्तो बहुभाषिक मुलुकमा त्यस्ता मुद्दा हजारौं भेट्नुहुनेछ ।
मातृभाषा, राष्ट्रिय भाषा र अन्तर्राष्ट्रिय भाषाका अनेकौं समस्या र मुद्धा हुन सक्छन् । आफुलाई चाख लागेको एउटा मुद्धा छनौट गर्नुहोस् । तपाईंको विषय क्षेत्र शैक्षिक नेतृत्व हो भने शिक्षामा नेतृत्वका मुद्धा पहिचान गर्नुहोस् । त्यो नेतृत्व केन्द्रीय, प्रादेशिक वा स्थान विशेष हुन सक्छ । वा एउटा विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालय भित्रको नेतृत्व हुन सक्छ । वा एउटा कक्षा कोठा भित्रको, एउटा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको पनि हुन सक्छ । यसैवाट मुद्धा उठान गर्नुहोस् ।
यी त उदाहरण मात्रै भएर आ–आफ्नो विषय क्षेत्रमा यसै गरी विचार गर्ने प्रयास गर्नुभयो भने के लेख्ने भन्ने समस्या समाधान हुन्छ । यसरी आफ्नो लेखको लागि मसला खोज्दा सकेसम्म आलोचनात्मक, समालोचनात्मक, बहसयोग्य, नयाँ विचारको सम्प्रेषण, उपलब्ध सिद्धान्तलाई चुनौती दिने खालको, सिद्धान्त र व्यवहार विचको फरकपन, स्थानीय परिवेशमा प्रयोग हुन सक्ने, आफ्नो विषय क्षेत्रमा राज्यको नीतिमा प्रभाव पार्न सक्ने जस्ता योगदानमूलक शिर्षकको खोजी गर्ने प्रयास गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
शिक्षा विषयमा रुची राख्नेका लागि केही समसामयिक अनुसन्धानात्मक शीर्षकका उदाहरण तल दिइएको छ र यही नै हुनुपर्छ भन्ने छैन, शब्द चयन आकर्षक बनाउन प्रयास गर्नुहोस् ।
- Letter grading: Is thisamilestone in evaluation or bizarre?
- Mathematics contents in lower grades of private schools: Damaging or boosting performance?
- Lecture dominated pedagogy: Will this work in 21st century?
- Language dilemma in lower grades: Mother tongue vs medium of instruction
- Imaging oneself: Relevance of IT based self-education
- Virtual classroom: Will this beasubstitute to brick ones?
यस्ता थुप्रै शीर्षक तपाईं कोर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो विषय क्षेत्रमा र लेख्ने भनेकै पाठकका लागि हो । त्यसैले शीर्षक लेख्दा अलि सटिक र आकर्षक बनाउन सके धेरै राम्रो । (तपाईं आफ्नो शीर्षक मेरो मेसेज बक्समा पठाउनुहोस् र छलफल गरौंला ।) मिल्दैन कि भनेर लाज नमान्नुहोस् । लेखेपछि नै मिल्दै जाने हो । तपाईंको थेसिसबाटै पनि थुप्रै लेख जन्मन सक्छन् । त्यता तर्फ पनि ध्यान दिनुहोला । स्नातकोत्तर र विद्यावारिधिका थेसिसलाई आधार बनाएर प्राज्ञिक जर्नलमा लेख लेख्ने प्रचलन बढ्दो छ । एउटा प्रोफेसरसंग बसेर विधिपूर्वक तयार पारिएको शोधपत्र आफैमा विश्वसनीय हुन्छ ।
पाठ ३ : लेखनको शुरुवात कसरी गर्ने ? (भाग १)
लेखनको शुरुवात गर्दा पहिला मुख्य रूपमा यसको प्रारूपमा विचार गर्नु पर्ने हुन्छ । पहिला प्रारूप कोरिसकेपछि काम गर्न सजिलो हुन्छ । प्रारूप भनेको एउटा खाका हो जसले तपाइंलाई कुनै पनि कुरा नछुटाईकन अगाडि बढ्न मद्दत गर्दछ । सामान्यतयाः लेखन शुरु गर्दा मुख्य ४ वटा तहको विचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
१. शीर्षकको चयन
२. शीर्षक अनुसार अनुसन्धानात्मक कार्य
३. लेखन ढाँचाको प्रारूप र
४. लेखन कार्य
१. शिर्षकको चयन : यस सम्बन्धमा अघिल्लो पाठमा नै चर्चा गरिसकिएको छ । मुख्य कुरा तपाइंको लेखको शिर्षक समसामयिक हुनुपर्दछ । बजारमा उपलब्ध सिद्धान्लाई चुनौती दिन सक्ने वा कारण सहित सोही सिद्धान्तको पुष्टी गर्ने खालको पनि हुन सक्छ । त्यो भनेको तपाईंले संकलन गर्नु भएको सूचनाको विश्लेषणले जनाउने कुरा हो । तर पनि पहिलानै यस्ता कुरामा विचार गरेर शिर्षक छान्न सके पछि लेखनमा सजिलो पर्दछ ।
तथ्यका आधारमा पुष्टी हुने खालको शीर्षक रोज्नु अति आवश्यक हुन्छ । शिर्षक रोज्दा यौटा तर पछि सूचना (तथ्यांक) विश्लेषण गर्दा अर्कै अर्थ लाग्ने खालको भयो भने शिर्षक काम नलाग्ने हुन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा शिर्षक परिवर्तन पनि गर्न सकिन्छ । यसो भन्दैमा जे पनि शिर्षक रोज्ने र पछि सुधार गर्ने भन्ने होइन । शिर्षक अनुसारको अनुसन्धानात्मक प्रश्न र त्यही प्रश्नको उत्तर आउने खालको सूचना संकलन गरेपछि शीर्षक नमिल्ने भन्ने प्रश्न नै रहन्न । सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको तपाईंको आफ्नो रुचिको विषयवस्तु नै हो शीर्षक चयनका लागि । आफूले छानेको शिर्षकका बारे आफ्ना सहकर्मी र सिनियरहरु संग छलफल गर्ने र सुझाव समेट्ने कार्य गर्नु भयो भने अझ राम्रो हुन्छ । आफ्नो विषयमा बिभिन्न जर्नलमा प्रकाशित लेख अध्ययन गरेर शिर्षक रोज्ने काम अर्को महत्वपूर्ण कडी हो । यसो गर्दा तपाइंको अनुसन्धानमा मौलिकता कायम गर्न मद्दत मिल्छ ।
२. शिर्षक अनुसार अनुसन्धानात्मक कार्य : अनुसन्धानात्मक कार्यको शुरुवात बिभिन्न स्रोतमा उपलब्ध लेख, रचना, पुस्तकका अध्ययनबाट हुन्छ । जसलाई Literature Review भनिन्छ । आफ्नो विषयवस्तुसंग सम्बन्धित यस अगि गरिएका अनुसन्धान अध्ययन गर्न छुटाउनै हुँदैन । यस्तो अध्ययनले तपाईंको रुचिको विषयमा बजारमा के कस्ता ज्ञान उपलब्ध छन् र के गर्न बाँकी छ भन्ने कुराको जानकारी हुन्छ । बाँकी काम भनेकै research gap हो र त्यस्तो gap लाई समेटेर शीर्षक पुनरावलोकन गर्न सकियो भने त तपाइंको लेख अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै गुणस्तरयुक्त हुन्छ ।
त्यसैले पहिलो चरणमा अध्ययन गर्ने नै हो । अरुको लेख रचना नपढी अनुसन्धानात्मक लेख लेख्ने सोच राख्न सकिन्न । यसरी पढ्ने सामग्री खोज्दा मौलिक लेख रचना, विषयवस्तुसंग मेल खाने अनुसन्धानात्मक लेख, तपाईंको विषयले समेट्ने सान्दर्भिक नीति, तथा सैद्धान्तिक आधारका बारेमा अध्ययन गर्नु लाभकारी हुनेछ । यस्ता अध्ययनले तपाइंको अनुसन्धानमा गुणात्मक सहयोग पुर्याउंछन् । यिनै मसलालाई आधार मानेर तपाईं सजिलै आफ्ना सूचना विश्लेषणलाई यथार्थ परक बनाउन सक्नुहुन्छ ।
यसका अतिरिक्त आफ्नो मौलिकपनलाई झल्काउन तपाईं key actors संग अन्तवार्ता लिएर पनि त्यो सूचना आफ्नो अनुसन्धान बलियो पार्ने काम उपयोग गर्न सक्नु हुन्छ । तर सधैं यो जरूरी हुँदैन । उपलब्ध तथ्य र सूचनालाई आधार बनाएर मात्रै पनि अनुसन्धानात्मक लेख तयार पर्न सकिन्छ । थप सूचना संकलन गरेर पहिलाको अनुसन्धानात्मक लेखलाई पुष्ट्याई वा आलोचनात्मक रूपमा उपयोग गरेर मौलिक लेख सिर्जना गर्न सकिन्छ ।
पाठ ४ : लेखनको शुरुवात कसरी गर्ने ? (भाग २)
ध्यान दिनुपर्ने अर्को कुरा के हो भने आफ्नो अनुसन्धानको लागि सकेसम्म धेरै स्रोतबाट सूचना (तथ्यांक) संकलन गर्नु । जति धेरै स्रोतबाट सूचना संकलन गर्न सक्नुभयो उति नै धेरै तपाइंको लेख भरपर्दो मानिन्छ । यसले तपाईंलाई आफ्नो विश्लेषण बिभिन्न कोणबाट गर्न मद्दत गर्दछ । यसरी सूचना खोज्ने क्रममा तपाईंले प्रयोग गर्ने वेव साइटले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् ।
यसरी वेव साइट खोज्दा .com भन्दा पनि .edu, .gov र .org मा जानुहोला जुन भरपर्दो र विश्वसनीय मानिन्छन् । .com का सूचना एकांगी र विज्ञापनमूलक बढी हुन्छन र तिनले अनुसन्धानमा खासै सहयोग पुर्याउन सक्दैनन् । तर पनि विचारका लागि .com अध्ययन गर्नु अपराध भने होइन । google मा पनि Google Scholar भित्र पस्नु भयो भने बढी लाभकारी हुनेछ ।
आफूले काम गर्ने वा पढ्ने संस्थाले कतिपय जर्नल अन लाइन किनेका हुन्छन् । त्यस्तो जर्नलको अध्ययन तपाईं पनि निःशुल्क गर्न सक्नु हुन्छ । Free Journal Website भेटाउन सक्नुहुन्छ । खोज्नुहोस र उपयोग गर्नुहोस् । विदेशमा पढ्ने आफ्ना नातेदार वा इष्टमित्रलाई गुहारेर पनि तपाईं नयाँ नयाँ लेख रचना पढ्ने चाँजो मिलाउन सक्नुहुन्छ ।
आफूलाई घत परेको कुनै अनुसन्धाता र तिनका लेख आवश्यक परे तिनका वेव साइटमा गएर इमेल ठेगाना पत्ता लगाउने र पत्राचार गरी उनीहरुका लेख उपलब्ध गर्ने काम पनि थुप्रै अनुसन्धाताले गर्दै आएका छन् ।
३. लेखन ढाँचाको प्रारूप : लेखन कार्य गर्दा कसरी अगाडि बढ्ने, के के कुरा राख्ने र कुन कुन पक्षलाई जोड दिने भन्ने कुरा थाहा पाउनु निकै जरूरी हुन्छ । लेख्न बस्दा तपाईंसंग आवश्यक सूचना वा तथ्यांक संकलन भैसकेको हुनुपर्दछ । यसरी संकलन गरिएका सूचनालाई विश्लेषण गर्दै संगठित रूपमा राख्नुपर्दछ ।
तपाईंको अनुसन्धानले खोजेको प्रश्नको उत्तर आउने गरी यस्तो संगठन गर्नु वान्छनीय हुन्छ । यो एउटा पक्ष भयो । अर्को पक्ष भनेको तपाईंले पढ्नु भएका लेख रचना, अनुसन्धानात्मक कृति, थेसिस, पुस्तक, नीतिका दस्तावेज जे जति छन् ती paraphrase गरेर ठिक्क राख्नु पर्दछ । paraphrase भन्नाले अरुको विचार तपाइंको भाषामा पाठकलाई बुझाउने प्रक्रिया र विधि हो । यसमा कसको विचार कहाँबाट लिइएको भन्ने प्रष्ट उल्लेख हुनुपर्दछ ।
अरुको विचार हूबहू सार्नु भनेको वौद्धिक चोरी मानिन्छ र त्यो अनुसन्धानात्मक लेखमा ग्राह्य हुँदैन । जर्नल हाउसले वौद्धिक चोरीका लेखहरु ( plagiarised article) अस्वीकृत गरिदिन्छन् । त्यसैले अरुको विचार पढौं, आफ्नो भाषामा लेखौं र लेखकलाई क्रेडिट दिऔं । यो नै paraphrasing हो ।
कहीं कतै कसैको भनाई हूबहू राख्ने पर्ने भए quotation mark भित्र राखौं र कुन पेजबाट त्यो लिइएको हो पेज नम्बर समेत उल्लेख गरौँ । त्यसपछि क्रमशः लेखन कार्यको प्रारम्भ गर्नुहोस् ।
प्रकाशित मिति २०७४ माघ १६ ,मंगलवार
Sharad Simkhada3 years ago
Good read. Thank you Mana sir for effort.
Rajkumar Dulal3 years ago
This is truly helpful sir. Thanks for your generous talent !
Bhakti Prasad Subedi4 years ago
Thank you very much sir for kind ideas and information about research paper writing.
Bindu Hamal4 years ago
Namaskar ! sir . I respect your colourful words . Thank you so much for you artical.
दुर्गा बास्तोला(शिक्षक)4 years ago
सरको यो सन्देश मात्र नभै नेट एवं फेसबुकमा बरालिने जमातलाई पथ पर्दशकको भुमिकामा हुने छ ।यो बिचारलाई नमन गर्दछु ।
Bishnu Khatri4 years ago
Thank you sir, very good initiation
Keshar Jung k.c.4 years ago
So glad to see suchafruitful idea to start writing and who wanna to be writer and researcher ....
Sam Bahadur Gurung4 years ago
Nabin Dhital4 years ago
Thank you for your true advice and powerful knowledge sharing.
Shankar Prasad lohani4 years ago
Sir contribution garna khoju bhayeko kura ati ramro chha . Internet ma ati jaruri kuraharu ani related journal haru khojne method haru pani dinuhos sir . Pathak le yo kura bata pani faida pugchha hajur